I-Wms2Cad - iinkonzo ze-wms zisebenzisana neenkqubo ze-CAD - i-Geofumed
I-Wms2Cad - iinkonzo ze-wms zisebenzisana neenkqubo ze-CAD
NgoSeptemba, 2018 AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
I-Wms2Cad isixhobo esiyingqayizivele sokuzisa kwiinkcukacha ze-CAD zokudweba iWMS kunye ne-TMS njengeenkonzo. Oku kubandakanya iinkonzo zeemephu kunye nemifanekiso yeGoogle Earth kunye ne-OpenStreet.
Kulula, ngokukhawuleza nangokusebenzayo. Khetha kuphela uhlobo lwemephu ukusuka kuluhlu olukhankanywe ngaphambili lweenkonzo zeWMS okanye uchaza omnye umdla wakho, nqakraza kwindawo ofuna ukuyilanda ngayo imephu uze uyenze.
Isofthiwe iqulethe uludwe lweenkonzo ezininzi ze-WMS ezikhankanywe ngaphambili. Uluhlu lwamaphupha afumanekayo lunokwandiswa lula ngokukhuphela iindlela zeenkonzo zomdla wethu. Ungakwazi kwakhona ukuchaza ngokuqhagamshelweyo ukuxhamla kwinkonzo yemephu.
I-Wms2Cad ivumela iiprogram ze-CAD ezidumileyo, zombini iinguqu ezitsha kunye nezitsha, ukukhuphela iimephu ezivela kwi-intanethi.
AutoCAD: ukusuka kwi-2000 ukuya kwi-2018, i-32 bits kunye ne-64 bits,
AutoCAD LT: kuphela nge-LT Extender okanye iCadstaMax,
MicroStation - V8.1, V8 XM, V8i, i-Connect Edition, i-PowerDraft, i-PowerMap, i-Redline,
IntelliCAD: zonke iinguqu ezinokwenzeka malunga nokuqulunqwa kwedatha ye-raster, kubandakanywa ne-progeCAD, iGstarCAD, i-ZwCAD, i-BricsCad, i-ActCAD kunye nokunye,
ARES UMlawuli-2018 okanye omtsha.
Isofthiwe isebenza kwiinguqu ezininzi zeWindows kwi-PC, ukusuka kwi-Windows XP ukuya kwi-Windows 10, kuquka neenguqu ze-64.
Into efanelekileyo kukukhuphela kwaye uyayizama ngeprogram ye-CAD esisisebenzisa.
Landa iWms2Cad uze uyizame.
Ingcaciso yeedemo isebenza ngokupheleleyo kwiintsuku ze-30. Kwimodi yedemo, unokukhuphela kwii-1000 tile.
Ukuthenga ilayisenisi iindleko ze-74 dollar kuphela. Thenga iWms2Cad.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iikholeji zeArcGIS ezifanelekileyo
Post Next Ingakanani umhlaba onokubaluleka kwisixeko sakho?Okulandelayo "